Yakanakisa Epoxy Resin Inonamira Inchoring Mugadziri uye Fekitori | Kuchenjera
Kuvaka nzvimbo dzekudyara simbi simbi uye screws
Boora maburi zvinoenderana nemirau → suka maburi nebhurasho uye mweya humburumbira → fambisa maA uye B zvikamu zvakasiyana → gadzira iyo yekudyara glue zvakaenzana kunyatsozadza nekusanganisa → shandisa chakakosha chishandiso kubaya iyo gomba mugomba → tenderera iyo simbi bar kana sikuruwa mugomba Pakati Pakati → kurapa → kuongorora kwehunhu
1. Zvinoenderana nezvinodiwa neinjiniya dhizaini, burora maburi munzvimbo inoenderana muzvinhu zvepasi (senge kongiri). Iyo dhayamita yegomba, kudzika kwegomba uye simbi bar dhayamita inofanirwa kutemerwa nevanyanzvi vehunyanzvi kana bvunzo dzemumunda.
2. Shandisa yakakosha mweya humburumbira, bhurasho kana muchina wakamanikidzwa mhepo muchina kuchenesa guruva riri muchibhorani. Inokurudzirwa kuidzokorora kwete pasi pe3 nguva. Panofanira kunge pasina guruva nemvura mugomba.
3. Dharira pamusoro pesimbi yesimbi uye woipukuta yakachena neacetone kana doro.
4. Sanganisa zvinhu A uye B muchiyero che2: 1 kusvikira zvanyatsoenzana, wozvidururira muchibhorani.
5. Tenderedza simbi yesimbi wobva waiisa pasi pegomba kuti uone kuti glue rinofashukira paburi uye nyatso chengetedza kudzivirira kubatika kweglue. Kunyangwe iyo glue dura yakazara kana kuti kwete inozokanganisa zvakananga simba rekusimbisa.
6. Munguva yekurapa, zvimiso zvinofanirwa kudzivirira kukanganiswa. Mushure me gelation, ichaporeswa zvizere mukamuri tembiricha kwemazuva 1-2.
7. Tarisa uone kana kurapa kuri kwese. Mbariro dzekudyara dzezvikamu zvakakosha dzinofanirwa kuiswa pa-saiti dhizaini-kubuda kuti uone kuti simba rekusimbisa rinosangana nezvinodiwa dhizaini; kuvakwa kweinotevera maitiro kunogona kuitiswa mushure mekuve vanokwanisa.
Pashure: Anchor Channel
Zvadaro: kemikari anchor bhaudhi